Ucwaningo Nentuthuko Yethu - Qiangzhong Machinery Technology Co., Ltd.
Umlando wokuqanjwa kwendabuko kweWenzhou Qiangzhong Imishini ungalandelwa emuva ku-1999. Kusuka kokupholisha okumsulwa okwenziwe ngesandla kuze kube kuwelding okuzenzakalelayo ngokuphelele nokupholisha, kusuka ekuphonseni okomile kuya ekuphonseni amanzi, abantu baseQiangzhong bahlala bephikelela emisha eqhubekayo. Lo moya usiholela enqubekela phambili. Akukashintshi kuze kube namuhla.Wenzhou Qiangzhong
Enqubeni yokukhiqiza esemqoka ye-bio-pharmaceutical, ukudla nesiphuzo, amakhemikhali amahle nezinye izimboni, uhlelo lwe-modular lunganciphisa ngempumelelo ukungcoliswa komkhiqizo kunqubo yokukhiqiza kanye nezindleko eziphezulu ezibangelwa iphutha lomuntu. Imishini yaseQiangzhong isebenzisa isoftware ye-AUTOCAD ne-3D eklanyweni lobuchwepheshe, inikezela ngezixazululo zesistimu ye-modular nezinsizakalo zobuchwepheshe, futhi inikezela ukusekelwa okuphelele kokuqinisekisa kwe-FDA ne-GMP ukuhlangabezana nezidingo zekhwalithi ephezulu yamakhasimende.
• Uhlelo lwamanzi ahlanzwe ngomjovo wamanzi
• Uhlelo lwe-CIP / SIP
• Uhlelo lokufaka umthamo
• Uhlelo lwe-batching-proof online-proof batching
Izici zokuhlanza indawo ehlanzekile yangaphakathi nengaphandle zibucayi futhi izidingo zokuhlanza kufanele zicatshangelwe ngokuphelele ngesikhathi sesigaba sokuklama. Idizayini ye-angle efile kufanele icatshangelwe ukuqinisekisa inhlanzeko nokuvala inzalo.
Lapho kuklanywa iziqukathi ezihlanzekile, iMishini yaseQiangzhong isebenzisa izindlela ezisizwa ngekhompyutha zakamuva ukulingisa ububanzi besifutho samabhola wokuhlanza we-CIP ukuqinisekisa ukuthi umphumela wokuhlanza uhlangabezana nezidingo zamakhasimende, futhi nenani lokuhlanza uketshezi liyancishiswa ukunciphisa izindleko zokusebenza zomsebenzisi. Kubalulekile futhi ukuhlanza indawo engaphandle yethangi. Imishini yaseQiangzhong ibheka bobabili ubuhle nobusizo lapho kuklanywa ithangi. Ingaphandle langaphandle kumele kube lula ukulihlanza futhi kufanele liphephe ku-opharetha.
• Amakhona namakhona ayindilinga
• Ingaphezulu lipholishiwe ngokulinganayo ukuze linikeze umbiko wokuhlola opholile
• Azikho izikhala noma izifaca
Izingxenye ezingenamthungo nezinsiza
Abantu abayi-8 kwezocwaningo nentuthuko